8 Ductile Cast Iron Manhole Cover (Round / Square) cap cover manholes ductile cast iron water treatment systems. – ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ
Ductile Cast Iron Manhole Cover (Round/Square) ฝาปิดท่อ ฝาบ่อพักเหล็กหล่อเหนียวระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป (ทรงกลม/สี่เหลี่ยม)
Ductile Cast Iron Manhole Cover (Round / Square) Ductile Cast Iron Manhole Cover (Round / square)
Quotation Cast Iron Ductile Ductile Manhole Cover Quotation
1) Ductile Cast Iron Grade 500-7, EN124 Standard Material of cast iron ductile. Stronger, more durable than gray cast iron. At the same strength level, less material is used. Make it lighter Easy maintenance than
2) Options,:the H = Hinge No. hinges, L = Locking key-lock lid, R = Rubber Seal A seal rubber smell
3) For more information: ask for price details for each model, please send an E. -mail or contact the sales department of the company.
1) Ductile Cast Iron Grade 500-7, EN124 Standard Material is made of cast iron. Stronger, more durable than gray cast iron. At the same strength level, less material is used. Make it lighter Easy maintenance than
2) Options,: the H = Hinge No. hinges, L = Locking key-lock lid, R = Rubber Seal seals are rubber smell.
Manhole cover cover
How to Install Cap off the well pipe drainage
Sewer Drain Manhole Cover with Frame Installation Method .
How to install the cover cap hole cover drain hose drain pan lid In the case ofaneck hole. To make the wood to support the pouring of concrete. And welded the steel rod to the frame to set the level.
1. Install frame with frame level set to ground level. By attaching the old steel structure to the neck of the pond together and adding diagonal steel to enhance strength.
2. Wrap the manhole cover or the lids cover close to the frame. And align the lid to the floor again. Before making concrete
mortar. 3. Put on concrete surface smooth to the pond lid for beauty. Leave it until the concrete is strength.
4. Installation method isaway to install the cover. Or the standard lagoon cover.
ຫມວກກັນກະທົບເຫລໍກຫລໍ່ Manhole Cover (Round / Square) Ductile Cast Iron Manhole Cover (ຮອບ / ສີ່ຫລ່ຽມ)
Ductile Cast Iron Ductile Ductile Manhole Cover Quotation
1) Ductile Cast Iron Level-500-7, EN124 Standard Material of cast cast iron ແຂໍງແຮງ, ທົນທານຫຼາຍກວ່າທາດເຫຼັກເຫຼັກ. ໃນລະດັບຄວາມເຂັ້ມແຂງດຽວກັນ, ການນໍາໃຊ້ວັດຖຸຫນ້ອຍລົງ. ເຮັດໃຫ້ມັນເບົາກວ່າ ບໍາລຸງຮັກສາໄດ້ງ່າຍກ່ວາ
2) Options ,: ໄດ້ H = Hinge ສະບັບເລກທີ hinges, L = ລັອກ lid ສໍາຄັນ, lock, R = ຢາງ Seal A ປະທັບຕາຢາງກິ່ນ
3) ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: ຂໍໃຫ້ມີການລາຍລະອຽດລາຄາສໍາລັບແຕ່ລະຮູບແບບ, ກະລຸນາສົ່ງ E. – ອີເມລຫຼືຕິດຕໍ່ຝ່າຍຂາຍຂອງບໍລິສັດ.
Ductile ສຽງໂຫວດທັງຫມົດທາດເຫຼັກ Sewer ເດັກ Manhole ປົກ ປົກຫນອງ scum ductile ແມ່ພິມສໍາລັບທໍ່ເຫຼັກ. Man Hoover Covers
ຫນຽວສຽງໂຫວດທັງຫມົດກວມເອົາທາດເຫຼັກ Manhole ແມ່ພິມສໍາລັບທາດເຫຼັກຫນຽວ spherical graphite (Spherioid Graphite ສຽງໂຫວດທັງຫມົດທາດເຫຼັກຫຼື Nodular ສຽງໂຫວດທັງຫມົດ ທາດເຫຼັກຫຼືຫນຽວສຽງໂຫວດທັງຫມົດທາດເຫຼັກ) ຫລວງປິດທໍ່ດຽວກັນທີ່ເຮັດດ້ວຍ ductile ແມ່ພິມສໍາລັບທາດເຫຼັກ. ແມ່ນທາດເຫຼັກທີ່ເປັນທາດເຫຼັກອັດແຫນ້ນ ຜົນກະທົບສູງ ມັນມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຫຼາຍກ່ວາທາດເຫລັກທີ່ມີສີເຫຼືອງ. ທີ່ສໍາຄັນແມ່ນນ້ໍາຫນັກເບົາກ່ວາທາດເຫຼັກເຫຼັກ. ເຮັດໃຫ້ການເປີດບໍາລຸງຮັກສາງ່າຍຂຶ້ນກ່ວາ
ຫນຽວສຽງໂຫວດທັງຫມົດທາດເຫຼັກ tops Manhole ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໃນການກໍ່ສ້າງຂອງໂຄງການເມືອງພາຍໃນຫຼືຕ່າງປະເທດປະເທດ, ເຊັ່ນຖະຫນົນຫົນທາງ, ສວນສາທາລະ, ຮຽບຮ້ອຍ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງສະຫມັກຂໍເອົາສໍາລັບວິສະວະກໍາການລະບາຍ, ການສະຫນອງພະລັງງານແລະໂຄງການສື່ສານ Telcom. ລະບົບລະບາຍນ້ໍາໃຫມ່ທີ່ສົມບູນແບບກວມເອົາທຸກລະບົບປະຕິບັດການຈາກ urea ພາຍໃນປະເທດໂດຍຜ່ານອຸດສາຫະກໍາ, dock ຫຼືການນໍາໃຊ້ສະຫນາມບິນ.
1) Ductile Iron Iron Grade 500-7, EN124 ວັດສະດຸ ມາດຕະຖານທີ່ ເຮັດຈາກເຫລໍກຫລໍ່ ແຂໍງແຮງ, ທົນທານຫຼາຍກວ່າທາດເຫຼັກເຫຼັກ. ໃນລະດັບຄວາມເຂັ້ມແຂງດຽວກັນ, ການນໍາໃຊ້ວັດຖຸຫນ້ອຍລົງ. ເຮັດໃຫ້ມັນເບົາກວ່າ ບໍາລຸງຮັກສາໄດ້ງ່າຍກ່ວາ
2) Options ,: ໄດ້ H = Hinge ສະບັບເລກທີ hinges, L = ລັອກ lid ສໍາຄັນ, lock, ແມວນ້ໍາ R = ຢາງ Seal ມີກິ່ນຢາງ.
ຂໍ້ກໍານົດການປົກຫຸ້ມຂອງທາດເຫຼັກ Ductile Manhole ປົກຄຸມຝາຄອບແບບມາດຕະຖານຊາຍຝັ່ງ
ຫນຽວສຽງໂຫວດທັງຫມົດທາດເຫຼັກໄດ້ຕະຫຼອດ Manhole ປົກ 350mm. B125 ້ໍາສ້າງຫລວງ ductile ແມ່ພິມສໍາລັບຜ່ານທາດເຫຼັກຂະຫນາດ 35 ຊຕມແລະນ້ໍາຫນັກ 125 ໂຕນ.
Ductile ສຽງໂຫວດທັງຫມົດທາດເຫຼັກໄດ້ຕະຫຼອດ Manhole ປົກ 500mm. A15 ້ໍາສ້າງຫລວງ ductile ແມ່ພິມສໍາລັບຜ່ານທາດເຫຼັກຂະຫນາດ 50 ຊຕມແລະນ້ໍາຫນັກ 15 ໂຕນ.
Ductile ສຽງໂຫວດທັງຫມົດທາດເຫຼັກໄດ້ຕະຫຼອດ Manhole ປົກ 600mm. A15 ້ໍາສ້າງຫລວງ ductile ແມ່ພິມສໍາລັບຜ່ານທາດເຫຼັກຂະຫນາດ 60 ຊຕມແລະນ້ໍາຫນັກ 15 ໂຕນ.
ຫນຽວສຽງໂຫວດທັງຫມົດທາດເຫຼັກໄດ້ຕະຫຼອດ Manhole ປົກ 600mm. B125 ້ໍາສ້າງຫລວງ ductile ແມ່ພິມສໍາລັບຜ່ານທາດເຫຼັກຂະຫນາດ 60 ຊຕມແລະນ້ໍາຫນັກ 125 ໂຕນ.
ຂວດນ້ໍາມັນຫລ່ຽມຂະຫນາດ 600 ມົນ C250 60 ຊົມ
ຫນຽວສຽງໂຫວດທັງຫມົດທາດເຫຼັກໄດ້ຕະຫຼອດ Manhole ປົກ 600mm. D400 ການປົກຫຸ້ມຂອງ ductile ເຫລໍກຫນອງວົງກໍາຂະຫນາດ 60 ຊຕມແລະນ້ໍາຫນັກ 40 ໂຕນ.
Ductile ສຽງໂຫວດທັງຫມົດທາດເຫຼັກໄດ້ຕະຫຼອດ Manhole ປົກ 800mm. A15 ້ໍາສ້າງຫລວງ ductile ແມ່ພິມສໍາລັບຜ່ານທາດເຫຼັກຂະຫນາດ 80 ຊຕມແລະນ້ໍາຫນັກ 15 ໂຕນ.
ຫນຽວສຽງໂຫວດທັງຫມົດທາດເຫຼັກໄດ້ຕະຫຼອດ Manhole ປົກ 800mm. B125 ້ໍາສ້າງຫລວງ ductile ແມ່ພິມສໍາລັບຜ່ານທາດເຫຼັກຂະຫນາດ 80 ຊຕມແລະນ້ໍາຫນັກ 125 ໂຕນ.
ຫນຽວສຽງໂຫວດທັງຫມົດທາດເຫຼັກໄດ້ຕະຫຼອດ Manhole ປົກ 800mm. C250 ການປົກຫຸ້ມຂອງ ductile ເຫລໍກຫນອງວົງກໍາຂະຫນາດ 80 ຊຕມແລະນ້ໍາຫນັກ 25 ໂຕນ.
ຫນຽວສຽງໂຫວດທັງຫມົດທາດເຫຼັກໄດ້ຕະຫຼອດ Manhole ປົກ 800mm. D400 ການປົກຫຸ້ມຂອງ ductile ເຫລໍກຫນອງວົງກໍາຂະຫນາດ 80 ຊຕມແລະນ້ໍາຫນັກ 40 ໂຕນ.
ມວນໂຟມລວດ Manhole ກວ້າງ 400mm B125 ມິນລິກເຫລໍກຫລ່ຽມກວ້າງ
40 ມົມມ້ວນໂລຫະທີ່ມີນ້ໍາມັນຫລ່ຽມ 600 ມົມ B125 60 ຊຕມ.
ຫມໍ້ຫຸງຕົ້ມກວນ Ductile ກວມເອົາ 700 ມມ B125
ຫນຽວສຽງໂຫວດທັງຫມົດທາດເຫຼັກ Square Manhole ປົກ 800mm. B125 ການປົກຫຸ້ມຂອງ ductile ເຫລໍກຕາຫນອງຂະຫນາດ 80 ຊຕມແລະນ້ໍາຫນັກ 125 ໂຕນ.
ຫນຽວສຽງໂຫວດທັງຫມົດທາດເຫຼັກ Square Manhole ປົກ 900mm. B125 ການປົກຫຸ້ມຂອງ ductile ເຫລໍກຕາຫນອງຂະຫນາດ 90 ຊຕມແລະນ້ໍາຫນັກ 125 ໂຕນ.
ວິທີການຕິດຕັ້ງ Cap ປິດທໍ່ດີລະບາຍ
Sewer Drain Manhole ຝາວິທີການຕິດຕັ້ງກອບ .
ວິທີການຕິດຕັ້ງທໍ່ຫຸ້ມຫຸ້ມຫຸ້ມຫຸ້ມຫຸ້ມຫຸ້ມຫຸ້ມຫຸ້ມທໍ່ລະບາຍນ້ໍາ ໃນກໍລະນີຂອງຂຸມຄໍ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໄມ້ສະຫນັບສະຫນູນການຫຼໍ່ຂອງຊີມັງ. ແລະເຊື່ອມໂລຫະເຫຼັກກັບພາເພື່ອກໍານົດລະດັບ.
1. ຕິດຕັ້ງກອບການ, ມີ Somerset ດັບເຟຣມແຕ້ມລະດັບກັບພື້ນດິນ. ແລະຈັດວາງຝາປິດກັບພື້ນເຮືອນອີກເທື່ອຫນຶ່ງ.
3 Concrete flush ພື້ນຜິວ plaster ກັບ bezel ໄປຍັງຫນອງທີ່ສວຍງາມ. ອອກຈາກລໍຖ້າຈົນກ່ວາສີມັງ, ແມ່ນ
4. ວິທີການຕິດຕັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອຕິດຕັ້ງການປົກຫຸ້ມຂອງຂຸມຜູ້ຊາຍ. ຫຼືຝາຂອງຂຸມຕາມມາດຕະຖານທົ່ວໄປ.
ວິທີການຮັກສາ lid ຍົກອອກໄປທໍ່ລະບາຍໄດ້ດີ
ວິທີການເປີດ, ປິດ Sewer Drain Manhole ປົກ.
1 .: ຈະແກ້ໄຂມັນ JobsDB.com ລັກບໍ່ມີບັນຫາຢ່າງລະອຽດເນື່ອງຈາກວ່າມູນຄ່າສໍາລັບ recycle ທີ່ໃຊ້ເສື້ອຜ້າຄົນດີແລະ Corrosion Resistance ເປັນ: ມັນຈະ JobsDB.com ບໍ່ເຄີຍເຮັດແນວໃດມັນເຮັດສະຫນິມເນື່ອງຈາກວ່າມີພັຍດີແລະ Corrosion Resistance
2 ໄດ້ຍາວບໍລິການຊີວິດ: ຫຼາຍກ່ວາ 30 ປີມັນ JobsDB.com ສາມາດແລະໃນການນໍາໃຊ້. ບໍ່ມີຄໍາວ່າທຸກ crack ໃນການທົດລອງຂອງ 2,000,000 Fatigue ທົບທາງລົບໄດ້ປະທັບຕາດີ: ມັນ JobsDB.com ສາມາດຈະແມ່ນການໃຊ້ເລເຊີ, ແລະປະສິດທິພາບປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຜູ້ພິດ Gases ຂອງປ່ອຍອອກຈາກ cesspool
3 Light, ນ້ໍາຫນັກສູງສຸດ Tensile ກ່ອງຕິດຕັ້ງງ່າຍການໂຫຼດສູງສຸດກ່ຽວກັບຄວາມອາດສາມາດ: ການໂຫຼດສູງຄົນກ່ຽວກັບຄວາມອາດສາມາດເຮັດໄດ້ເກີນຄາດການ. ໃຫ້ insulation ສໍາລັບທາດເຫຼັກສຽງໂຫວດທັງຫມົດແລະພ້ອມຫນຽວ
4. ເປັນ Design- Free: ມັນ JobsDB.com ສາມາດອີງຕາມການຜູ້ໃຊ້ອອກແບບໄດ້ເວົ້າວ່າຄວາມຕ້ອງການຂອງ. ລວມທັງສີ, ຮູບແບບ, ຂໍ້ມູນບໍ່ມີໃດ ໂຕ້ຖຽງ: ມີແມ່ນບໍ່ຫຼືຟື້ນຕົວໃນເວລາທີ່ລົດຜ່ານ.
# grating ເຫຼັກ grating ໃຍແກ້ວ, overflow sewer ຢາງຢູ່ອ້ອມຂອບຂອງສະນຸກເກີທີ່ສໍາເລັດ, manholes # ປົກຫຸ້ມຂອງ, ແມ່ພິມສໍາລັບການປົກຫຸ້ມຂອງທາດເຫຼັກ, sewer, # FRP-FIBERGLASS STEEL Plastic ແຂງຮູ້ບຸນຄຸນ, # ຫນຽວ, ສຽງໂຫວດທັງຫມົດທາດເຫຼັກ manhole. COVER, #Swimming Overflow ບາຍນ້ໍາ Gully ຮູ້ບຸນຄຸນ Gutter, #Saddle ຄລິບ clamp ລັອກຕົວລັອກ, # ຄລິບລັອກເລືອກຍຶດແຜ່ນ sieve, #Curbed ບາຍນ້ໍາ grating Scupper, ຈັ່ນຈັບ # sieve ໃບຂີ້ເຫຍື້ອກ່ຽວກັບການ sidewalk ຂ້າງຂ້າງການຄວບຄຸມໄດ້, #Egg Crate ປີ້ງການແຜ່ກະຈາຍ. ເຮັດໃຫ້ມີແສງ divider ບອດກະດານຕູ້ # ຄະນະກໍາມະ slatted ປີ້ງ separates ຕັນຫນ້າກາກໄຟຮົ່ມແສງສະຫວ່າງ decorate ຂອງຕູ້ປາ, #Stair. Tread Nosing ຂັ້ນຕອນປົກ Protector # ປົກດັງແລະມຸມ trim ladders ກະດານ cover ລື່ນ #Tree Guard ຄວາມປອດໄພ Grating ກອບ # -frame ປີ້ງປົກປ້ອງພື້ນຖານຂອງຕົ້ນໄມ້ດັ່ງກ່າວ, #Perforated Pegboard Hook Shelves Racking ການເກັບຮັກສາຊຸດເຄື່ອງມື DIY, # ເຫຼັກ plank Winnipeg Board. ກໍາແພງກໍາແພງ, ກໍາແພງຫີນ hanging, ຮ້ານຮາດແວ, ພື້ນເຮືອນ, ຍ່າງທາງສູງ
Manhole ກວມເອົາການເຂົ້າໄປໃນໂລກໃຕ້ດິນຂອງທໍ່ລະບາຍນ້ໍາ, ສາຍນ້ໍາ, ສາຍໄຟຟ້າ, ສາຍທໍ່, ແລະອື່ນໆ. ຫມວກກັນກະທົບແມ່ນຮູບແບບຂອງສິນລະປະ. ພວກເຂົາເຈົ້າປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນ ‘Sanitary Sewer’ ຫຼື ‘Storm Sewer’ ແຕ່ວ່າໂດຍພື້ນຖານແລ້ວມັນອາດຈະເປັນສິ່ງທີ່ອ່ອນແອ. Manhole ຄອບຄຸມມີຮູບແບບ / ການອອກແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນກ່ຽວກັບພວກເຂົາແລະໂລໂກ້ທີ່ກໍານົດເອງຖ້າຫາກວ່າເມືອງຕ້ອງການ. ເບິ່ງລົງໃນເວລາຖັດໄປທີ່ທ່ານກໍາລັງຍ່າງຜ່ານເມືອງແລະສັງເກດ. ການປົກຫຸ້ມຂອງ Manhole ແມ່ນຂອງທາດເຫຼັກ cast. ການປົກຫຸ້ມຂອງເຫຼົ່ານີ້ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຄວາມຮຸນແຮງດັ່ງນັ້ນເວລາທີ່ຂັບລົດຜ່ານພວກມັນ, ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຖືກຂັດຂວາງ. Manhole ປົກຄຸມປົກກະຕິແລ້ວມີນໍ້າຫນັກ 100+ ປອນແຕ່ລະຄົນ. ບາງຄົນມີຮູເປີດທີ່ໃຫ້ນ້ໍາເຂົ້າໄປໃນບ່ອນທີ່ຂີ້ຝຸ່ນ. ຄົນອື່ນໄດ້ປິດບັງເຄີ້ມຂຸມທີ່ບໍ່ໄດ້ໄປທຸກໆທາງໂດຍຜ່ານການປົກຫຸ້ມຫຼືຈັດການຈັບມືເຊັ່ນ: ຈັບມືຫຼືປຸ່ມແຫວນ. ການປົກຫຸ້ມຂອງ Manhole ສາມາດ bolted ກັບຂອບສໍາລັບເຫດຜົນຄວາມປອດໄພ. ຫມວກ Manhole ຍັງສາມາດມີເພັດຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງການປົກຫຸ້ມແລະ bolted ກັບພາທີ່ໄດ້ຖືກພິຈາລະນາປົກກະຕິ watertight. ເປັນຫຍັງບ່ອນຫລຸມຝັງສົບຫຼາຍທີ່ສຸດກວມເອົາຮອບ? ການປົກຫຸ້ມຂອງ Manhole ແມ່ນມົນຍ້ອນວ່າການປົກຫຸ້ມຂອງມົນບໍ່ສາມາດຕົກລົງໂດຍຜ່ານການເປີດວົງກົມ. ປົກຫຸ້ມຫຸ້ມທີ່ນອນຢູ່ເທິງບ່ອນນັ່ງ; ດັ່ງນັ້ນ, ເສັ້ນຜ່າກາງຂອງກອບເປີດແມ່ນຫນ້ອຍກວ່າປົກຫຸ້ມຫຸ້ມ. ໃນຂະນະທີ່ການປົກຫຸ້ມຮຽບຮ້ອຍມີຮູບສີ່ຫລ່ຽມມົນຫລືສີ່ຫລ່ຽມມຸມສາກອາດຈະຕົກລົງໂດຍຜ່ານການເປີດຖ້າຫາກວ່າທາງຂວາງໃນຂຸມ. ມັນກໍ່ງ່າຍກວ່າທີ່ຈະຂຸດຂຸມວົງກົມ. ການປົກຫຸ້ມຂອງມົນແມ່ນງ່າຍທີ່ຈະເຄື່ອງຢູ່ໃນເຄື່ອງ lathe. ການປົກຫຸ້ມຂອງມ້ວນກົມສາມາດລອກໄດ້, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍທີ່ຈະຍ້າຍຖ້າຈໍາເປັນ. ເປັນຫຍັງບ່ອນຫລຸມຝັງສົບຫຼາຍທີ່ສຸດກວມເອົາຮອບ? ການປົກຫຸ້ມຂອງ Manhole ແມ່ນມົນຍ້ອນວ່າການປົກຫຸ້ມຂອງມົນບໍ່ສາມາດຕົກລົງໂດຍຜ່ານການເປີດວົງກົມ. ປົກຫຸ້ມຫຸ້ມທີ່ນອນຢູ່ເທິງບ່ອນນັ່ງ; ດັ່ງນັ້ນ, ເສັ້ນຜ່າກາງຂອງກອບເປີດແມ່ນຫນ້ອຍກວ່າປົກຫຸ້ມຫຸ້ມ. ໃນຂະນະທີ່ການປົກຫຸ້ມຮຽບຮ້ອຍມີຮູບສີ່ຫລ່ຽມມົນຫລືສີ່ຫລ່ຽມມຸມສາກອາດຈະຕົກລົງໂດຍຜ່ານການເປີດຖ້າຫາກວ່າທາງຂວາງໃນຂຸມ. ມັນກໍ່ງ່າຍກວ່າທີ່ຈະຂຸດຂຸມວົງກົມ. ການປົກຫຸ້ມຂອງມົນແມ່ນງ່າຍທີ່ຈະເຄື່ອງຢູ່ໃນເຄື່ອງ lathe. ການປົກຫຸ້ມຂອງມ້ວນກົມສາມາດລອກໄດ້, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍທີ່ຈະຍ້າຍຖ້າຈໍາເປັນ. ເປັນຫຍັງບ່ອນຫລຸມຝັງສົບຫຼາຍທີ່ສຸດກວມເອົາຮອບ? ການປົກຫຸ້ມຂອງ Manhole ແມ່ນມົນຍ້ອນວ່າການປົກຫຸ້ມຂອງມົນບໍ່ສາມາດຕົກລົງໂດຍຜ່ານການເປີດວົງກົມ. ປົກຫຸ້ມຫຸ້ມທີ່ນອນຢູ່ເທິງບ່ອນນັ່ງ; ດັ່ງນັ້ນ, ເສັ້ນຜ່າກາງຂອງກອບເປີດແມ່ນຫນ້ອຍກວ່າປົກຫຸ້ມຫຸ້ມ. ໃນຂະນະທີ່ການປົກຫຸ້ມຮຽບຮ້ອຍມີຮູບສີ່ຫລ່ຽມມົນຫລືສີ່ຫລ່ຽມມຸມສາກອາດຈະຕົກລົງໂດຍຜ່ານການເປີດຖ້າຫາກວ່າທາງຂວາງໃນຂຸມ. ມັນກໍ່ງ່າຍກວ່າທີ່ຈະຂຸດຂຸມວົງກົມ. ການປົກຫຸ້ມຂອງມົນແມ່ນງ່າຍທີ່ຈະເຄື່ອງຢູ່ໃນເຄື່ອງ lathe. ການປົກຫຸ້ມຂອງມ້ວນກົມສາມາດລອກໄດ້, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍທີ່ຈະຍ້າຍຖ້າຈໍາເປັນ. ໃນຂະນະທີ່ການປົກຫຸ້ມຮຽບຮ້ອຍມີຮູບສີ່ຫລ່ຽມມົນຫລືສີ່ຫລ່ຽມມຸມສາກອາດຈະຕົກລົງໂດຍຜ່ານການເປີດຖ້າຫາກວ່າທາງຂວາງໃນຂຸມ. ມັນກໍ່ງ່າຍກວ່າທີ່ຈະຂຸດຂຸມວົງກົມ. ການປົກຫຸ້ມຂອງມົນແມ່ນງ່າຍທີ່ຈະເຄື່ອງຢູ່ໃນເຄື່ອງ lathe. ການປົກຫຸ້ມຂອງມ້ວນກົມສາມາດລອກໄດ້, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍທີ່ຈະຍ້າຍຖ້າຈໍາເປັນ. ໃນຂະນະທີ່ການປົກຫຸ້ມຮຽບຮ້ອຍມີຮູບສີ່ຫລ່ຽມມົນຫລືສີ່ຫລ່ຽມມຸມສາກອາດຈະຕົກລົງໂດຍຜ່ານການເປີດຖ້າຫາກວ່າທາງຂວາງໃນຂຸມ. ມັນກໍ່ງ່າຍກວ່າທີ່ຈະຂຸດຂຸມວົງກົມ. ການປົກຫຸ້ມຂອງມົນແມ່ນງ່າຍທີ່ຈະເຄື່ອງຢູ່ໃນເຄື່ອງ lathe. ການປົກຫຸ້ມຂອງມ້ວນກົມສາມາດລອກໄດ້, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍທີ່ຈະຍ້າຍຖ້າຈໍາເປັນ.Ductile Cast Iron Manhole Cover Ductile Cast Iron Manhole Cover ຜະລິດຈາກ Ductile Cast Iron, ຜະລິດຕາມມາດຕະຖານ EN124, ທົດສອບໂດຍສະຖາບັນ TAFE ໄທ. ເລືອກຈາກຊັ້ນຮຽນຈໍານວນຫຼາຍຈາກ 2-40 ໂຕນ, ທັງສອງມີ hinges ແລະ lock ຕ້ານລັກ. ລາຄາປະກອບມີ 1 ຊຸດພ້ອມຝາ FRP Manhole. ຜະລິດຈາກວັດສະດຸ FRP reinforced fiber reinforced, EN124 ບໍ່ມີຂີ້ເຫຍື້ອເຊັ່ນທາດເຫລໍກທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ເລືອກຈາກ 2-40 ໂຕນ, ງາມກັບທໍາມະຊາດ. ບໍ່ນິຍົມໃນຕະຫຼາດເພື່ອຊື້ວັດຖຸໂບລານຖືກຖືກລັກ.
ເສັ້ນທາງເຊື່ອມຕໍ່ rod ຍ້າຍ U ລະບາຍ ditch ຕາມຂອບຂອງ sidewalk ໄດ້, ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງມາຕຣິກເບື້ອງ, ຕາຫນ່າງເຫຼັກ, ຕາຫນ່າງເຫຼັກ, ທີ່ມີເຟຣມ, vents, ນ້ໍາ, ສາຍເຫຼັກ, tearing, ພັບຂຸມ jig, ເຫຼັກຂ້ອນຂ້າງຍາວ, ເສັ້ນໄຍກາກບອນ, TROTTERS ໂຄງສ້າງ, ຕິດຕາມໄກ່ໄດ້. ການລະບາຍ, ຂັ້ນຕອນຕ້ານຄວາມຜິດພາດພຽງ, ລາງລົດໄຟ, ສຸດທິ mini ທີ່ມີກິ່ນຫອມ, block ປູນອກ. ກະແສກະແສນ້ໍາຂົ້ນແຍກແຍກເປືອກເສດທີ່ລອຍຕົວເຂົ້າໄປໃນທໍ່ຢູ່ຕີນຂອງຕີນ. ຂີ້ຝຸ່ນ, ຂີ້ເຫຍື້ອ, ສິ່ງເສດເຫຼືອ, ອາຫານ, ໃບ, ເຈ້ຍ, ກ້ອນຫີນ, ກ່ອງ, ຂີ້ເຫຍື້ອ ເສັ້ນຂ້າງໃນ U ຮູບຮ່າງເທິງຖະຫນົນ, ຂໍ້ກໍານົດມາດຕະຖານຂອງເມືອງ. ກະຊວງສາທາລະນະສຸກແລະເມືອງແລະການວາງແຜນປະເທດ ກະຊວງຖະຫນົນຫົນທາງຊົນນະບົດ ອົງການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ETA, Sewer cover ເດັກ manhole ຍົກ Key, ນ້ໍແກງລະບາຍ driveway, ຂີ້ຝຸ່ນຖະຫນົນຫນ້າຈໍ grating ໃກ້ Footbath, trapper ໃບບາຍນ້ໍາທີ່ປອດໄພຕະແກງຈະລາຈອນ.
ທໍ່ລະບາຍນ້ໍາ ທໍ່ຫຼອດແມ່ນຫຍັງຄືທໍ່ແມ່ນທໍ່ທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອປິດທໍ່. ການປົກຫຸ້ມຂອງທໍ່ແມ່ນຍັງໃຊ້ເພື່ອປົກຄຸມລະບົບລະບາຍນ້ໍາ, ລະບົບໄຟຟ້າ, ໂຮງງານການປິ່ນປົວດ້ວຍນ້ໍາປະປາ. ການປົກຫຸ້ມຂອງທໍ່ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດແນວໃດ? ຝາປິດທໍ່ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຊ່ວຍປ້ອງກັນເລື່ອງຕ່າງປະເທດ. ຫຼຸດລົງທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ ມັນສະຫນັບສະຫນູນການເຮັດວຽກຂອງການບໍາລຸງຮັກສາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທໍ່ທໍ່ເພີ່ມຄວາມງາມຂອງພື້ນທີ່ຕິດຕັ້ງເຊັ່ນດຽວກັນ. ປະເພດຂອງທໍ່ທໍ່ ການປົກຫຸ້ມຂອງທໍ່ແບ່ງອອກເປັນ2ປະເພດຕົ້ນຕໍ. ທໍ່ເຮັດຈາກຄອນກີດ ທໍ່ແກມສີຂີ້ເຖົ່າທີ່ເຮັດດ້ວຍທາດເຫຼັກ. ຫມວກກັນກະທົບຂອງເສັ້ນໄຍປະສົມ. ທໍ່ຍືດທີ່ເຮັດດ້ວຍທາດເຫຼັກ casting ຂີ້ເຫຍື້ອ B: ຝາຄອບປະຕູຕາມການນໍາໃຊ້. ທໍ່ທໍ່ສໍາຫລັບການລະບາຍນ້ໍາ ຝາທໍ່ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສິ່ງອື່ນເຂົ້າໄປໃນຫນອງ.
ການປົກຫຸ້ມຂອງ manhole ເປັນແຜ່ນທີ່ຖອດອອກໄດ້ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຝາປິດຂອງຝາປິດກັ້ນ, ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຄົນຫຼືສິ່ງໃດມາລົ້ມລົງແລະຮັກສາຄົນແລະສິ່ງຂອງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ. ການປົກຫຸ້ມຂອງ Manhole ແມ່ນເຮັດອອກມາເລື້ອຍໆຈາກທາດເຫຼັກ, ເຕົາຫຼືປະສົມປະສານຂອງທັງສອງ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາບໍ່ແພງ, ເຂັ້ມແຂງແລະຫນັກ. ນ້ໍາຫນັກຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາຢູ່ໃນເວລາທີ່ການຈະລາຈອນຜ່ານພວກມັນແລະເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ມີເຄື່ອງມືທີ່ເຫມາະສົມທີ່ຈະເອົາພວກມັນອອກໄປ. manhole ການປົກຫຸ້ມຂອງອາດຈະໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງຈາກພລາສຕິກແກ້ວ, reinforced ຫຼືວັດສະດຸຜະອື່ນໆ (ບ່ອນທີ່ລັກປົກຫຸ້ມຂອງແມ່ນເປັນຫ່ວງ). ເນື່ອງຈາກວ່າກົດຫມາຍທີ່ຈໍາກັດການຈັດການທີ່ມີນ້ໍາຫນັກດ້ວຍມື, ວັດສະດຸປົກຫຸ້ມຂອງຝາປິດມ້ວນທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາ, ເຊິ່ງກໍ່ມີຜົນປະໂຫຍດຈາກການປ້ອງກັນຄວາມຜິດປົກກະຕິຫຼາຍຂຶ້ນແລະຄຸນສົມບັດການຕິດໄຟຟ້າ. ການປົກຫຸ້ມຂອງ manhole ກ່ຽວກັບຖານໂລຫະ, ມີຂອບຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ເຫມາະສົມກັບປົກຫຸ້ມ. ພື້ນຖານແລະປົກຫຸ້ມແມ່ນບາງຄັ້ງເອີ້ນວ່າ “ການຫລໍ່”, ເພາະວ່າພວກມັນມັກຈະເຮັດໂດຍຂະບວນການໂຍນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຕັກນິກການຫລໍ່ຊາຍ.
ການປົກຫຸ້ມຂອງປົກກະຕິແລ້ວມີຄຸນນະສົມບັດ “ຮູຮູ”, ເຊິ່ງເປັນເຄື່ອງມືຈັບ hook ແມ່ນ inserted ເພື່ອຍົກໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ. ເອົາຮູທີ່ສາມາດຖືກປິດບັງສໍາລັບຝານ້ໍາທີ່ມີນ້ໍາຫຼາຍ, ຫຼືສາມາດເຮັດໃຫ້ມີແສງສະຫວ່າງຜ່ານທາງ. ເຄື່ອງກຶງຫຼືທ່ອນໄມ້ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍປົກກະຕິເພື່ອຍົກໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ, ເຖິງແມ່ນວ່າເຄື່ອງມືອື່ນສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເຊັ່ນກັນ, ລວມທັງໄຟຟ້າ. ເຖິງແມ່ນວ່າການປົກຫຸ້ມຂອງແມ່ນຂະຫນາດໃຫຍ່ເກີນໄປທີ່ຈະເກັບກໍາໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ, ubiquity ຂອງເຂົາເຈົ້າແລະຮູບແບບຕ່າງໆແລະລາຍລະອຽດທີ່ພິມຢູ່ໃນພວກເຂົາໄດ້ນໍາເອົາບາງຄົນທີ່ຈະເກັບກໍາຮູບພາບຂອງການປົກຫຸ້ມຂອງຈາກທົ່ວໂລກ. ປົກຫຸ້ມຂອງ Manhole ບາງຄັ້ງແມ່ນຖືກລັກ, ປົກກະຕິແລ້ວສໍາລັບການຂາຍຄືນເປັນເສດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນລາຄາໂລຫະເພີ້ມຂຶ້ນ
ຜ້າຄຸມມ້າບໍ່ສາມາດລົ້ມລົງໂດຍຜ່ານການເປີດກວ້າງຂອງມັນ, ການປົກຫຸ້ມຂອງຝາເຮືອນອາດຈະຕົກລົງຖ້າມັນຖືກໃສ່ລົງໃນຂຸມ. ການມີຊີວິດຂອງ “ປາກ” ຂື້ນກັບຝານັ້ນກໍ່ຫມາຍຄວາມວ່າຮູທີ່ຢູ່ໃຕ້ພື້ນແມ່ນນ້ອຍກວ່າປົກຫຸ້ມ, ດັ່ງນັ້ນຮູບຮ່າງອື່ນໆອາດຈະພຽງພໍ. (A ສາມຫລ່ຽມ Reuleaux ຫຼືເສັ້ນໂຄ້ງອື່ນໆທີ່ມີຄວາມກວ້າງຄົງທີ່ຍັງຈະເຮັດໃຫ້ຈຸດປະສົງນີ້, ແຕ່ການປົກຫຸ້ມຮອບແມ່ນງ່າຍຕໍ່ການຜະລິດ).
ການປົກຫຸ້ມຂອງຝາປິດຮອບມີພື້ນຜິວຂະຫນາດນ້ອຍກ່ວາສີ່ຫຼ່ຽມມົນ, ດັ່ງນັ້ນອຸປະກອນການຫນ້ອຍຈຶ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະເອົາຫມວກກັນກະທົບ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາ. ພື້ນຜິວທີ່ມີນ້ໍາຫມອກແລະຫມວກກັນກະທົບຖືກເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນແລະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດການຂີ້ເຫຍື້ອຈາກການຈະລາຈອນ. ແຜ່ນສຽງຮອບແມ່ນງ່າຍດາຍຫຼາຍທີ່ຈະໃຊ້ເຄື່ອງຈັກໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງຮູດ. ການປົກຫຸ້ມຂອງວົງມົນບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຫມູນວຽນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຊ່ອງຄອດ. ການປົກຫຸ້ມຂອງ manhole ໄດ້ຕະຫຼອດສາມາດຍ້າຍໄດ້ງ່າຍໂດຍການຖືກ rolled. ຜ້າຄຸມມ້ວນຮອບສາມາດ lock ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໃນເວລາກາງຄືນ (ເຊັ່ນດຽວກັນກັບປະເທດຕ່າງໆເຊັ່ນຝຣັ່ງ) ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຍາກທີ່ຈະເປີດໂດຍບໍ່ມີເຄື່ອງມືພິເສດ. ການປົກຫຸ້ມຂອງ Lockable ບໍ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຮັດໃຫ້ເປັນຢ່າງຮຸນແຮງ, ເນື່ອງຈາກວ່າການຈະລາຈອນໃນໄລຍະພວກເຂົາບໍ່ສາມາດຍົກພວກເຂົາໂດຍການດູດ.
ເລນ, manhole ປົກທີ່ມຸມສາກແລະ Square ນີ້ / ການປົກຫຸ້ມຂອງໂທລະຄົມຈະ Junction ວົງ, ພາວະຖົດຖອຍ, manhole, ການປົກຫຸ້ມຂອງ manhole ປົກ ກ໊າຊແລະການປົກຫຸ້ມຂອງ, manhole, ກວດສອບເປັນເຄື່ອງປັບອາແຫນ້ນເປັນຈັບ A Curb ເດັກອ່າງຕົກລົງປົກ, manhole ຫນ້າດິນກ່ອງ Length.
ການປົກຫຸ້ມຂອງ Manhole ແມ່ນອອກຈາກທາດເຫຼັກ casting. ທາດເຫຼັກທີ່ເຮັດດ້ວຍທາດເຫຼັກແມ່ນທາດເຫຼັກທີ່ມັນຈະລົ່ນລົງແລະຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ຮຸ່ງ, ຫຼືໂຍນເຂົ້າໄປໃນດິນ. ການປົກຫຸ້ມຂອງ manhole ປົກກະຕິແມ່ນການໂຍນໂດຍນໍາໃຊ້ທາດເຫຼັກແກະສີຂີ້ເຖົ່າ. ທາດເຫຼັກເຫຼັກທໍ່ Ductile, ເນື່ອງຈາກວ່າຄວາມເຂັ້ມແຂງຫຼາຍຂອງຕົນ, ຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການກວມເອົາ manhole ພິເສດ, ເຊັ່ນ: ທີ່ຈະພົບເຫັນຢູ່ໃກ້ກັບປາຍທາງເຮືອບິນ. ທາດເຫຼັກເຫຼັກເຄືອບປະກອບດ້ວຍອົງປະກອບຂອງທາດເຫຼັກແລະອົງປະກອບໂລຫະປະສົມກາກບອນແລະ silicon. ຕົວແທນປະສົມປະສານ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນກາກບອນ, ໃຫ້ທາດເຫຼັກທີ່ມັນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະທົນທານ. ທາດເຫຼັກ cast iron Ductile ແມ່ນຜະລິດໄດ້ໂດຍການເພີ່ມມາກກັບທາດເຫຼັກທີ່ຂີ້ເຫຍື້ອ. ແມງການີນເຮັດໃຫ້ຄາບອນໃນທາດເຫຼັກທີ່ຈະສ້າງເປັນ nodules ແທນ flakes, ເຮັດໃຫ້ທາດເຫຼັກ casting ductile ຂອງຕົນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຫຼາຍແລະ malleability. ນອກຈາກທາດເຫຼັກ, ວັດຖຸດິບອື່ນໆທີ່ຕ້ອງການເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປົກຫຸ້ມຂອງຝາຫມໍ້ແມ່ນດິນຊາຍ, ເຊິ່ງແມ່ນດິນຊາຍທີ່ຖືກຜູກມັດດ້ວຍດິນເຜົາ. ດິນຊາຍສີຂຽວຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແມ່ພິມທີ່ມີທາດເຫລໍກທີ່ຖືກລີດລົງ. ການປະສົມປະສານດິນຊາຍປະກອບດ້ວຍດິນຊາຍ silica ປະມານ 90%, ດິນເຜົາ 4-10%, ສານອິນຊີ 2-10% (ເຊັ່ນຖ່ານຫີນ) ແລະນ້ໍາ 2-5%. ດິນຊາຍບໍ່ສີຂຽວ. ສີຂຽວຫມາຍເຖິງຄວາມຈິງທີ່ວ່າມັນໄດ້ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃນໄລຍະການໂຍນ.
ການອອກແບບນ້ໍາປະປາ Manhole ການປົກ ຫຸ້ມຂອງຝາຄອບປົກຫຸ້ມທຸກໆຝາປິດ, ຕັ້ງແຕ່ທໍາມະດາຈົນເຖິງທີ່ສວຍງາມທີ່ສຸດ, ແມ່ນຮູບແບບທໍາອິດໃນໄມ້ຫຼືອາລູມິນຽມ. ຕົວແບບນີ້ແມ່ນໃຊ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແມ່ພິມທີ່ມີທາດເຫລໍກທີ່ຖືກລອກລົງ. ການອອກແບບທີ່ຖືກສ້າງຂື້ນມາສໍາລັບຫນ້າກາກທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນເປັນຊ່າງຝີມືທີ່ມີຄວາມຊໍານານທີ່ສ້າງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ. ການປົກຫຸ້ມຂອງມ້າທັງຫມົດແມ່ນຂື້ນເນື່ອງຈາກວ່າວັດຖຸປະມານບໍ່ສາມາດຖືກຂຸດລົງເຂົ້າໄປໃນຮູຂຸມທີ່ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງດຽວກັນ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງສໍາຄັນເນື່ອງຈາກວ່ານ້ໍາຫນັກຂອງແມງປໍສາມາດຂ້າຜູ້ທີ່ຢືນຢູ່ພາຍໃຕ້ມັນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ການປົກຫຸ້ມຂອງຂຸມແມງມົນແມ່ນງ່າຍຕໍ່ການເຄື່ອນຍ້າຍໃນດ້ານທີ່ພວກເຂົາສາມາດມ້ວນ. ມີການປົກຫຸ້ມຂອງກ່ອງປະກອບ utility ມຸມສາກ, ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງໃນໄລຍະ manholes. Grating_Manhole_Expert
| ຂາຍສົ່ງຜູ້ຜະລິດ – ຂາຍຍ່ອຍ | ຕົວແທນການທົດແທນທີ່ຂາຍໄດ້, ຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍ ,, ຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍທີ່
CHANCON: ແລະໂຮງງານຜະລິດຈໍາຫນ່າຍໄດ້ໂດຍກົງໂດຍບໍ່ມີການຜະລິດຈາກ Shannon Company ສະຫນາມບິນເປັນຜູ້ຜະລິດແລະຈໍາຫນ່າຍ FRP grating gutters ລະບາຍຄວາມກະຕັນຍູ. Grille Bo lid cover ລະບົບທໍ່ນ້ sewage
CHANCON LIMITED, COMPANYSelect || GratingThai ຈໍາກັດ (ສໍານັກງານໃຫຍ່, ກົງກັນຂ້າມເຊັນທັນພະຮາມ 2) 199 Soi 21/1 ຟອດ SMD ທຽນ, ກຸງເທບ, ປະເທດໄທປະເທດໄທກຸງເທບ
#Mobile (ການຂາຍ). : 081 932 7894, 061 647 0184-6 ໄດ້ Tel: 02 451 0780-1, ໄດ້ Fax: 02 451 0786 E-mail ໄດ້: Mkt@chancon.co.th
ສາຍ @: @iCHANCON Line ທີ່ (iD ແມ່ນ): ICHANCON
Website: Www.chancon. .co.th , Http://GratingThai.com,Http://GratingThai.co.th , http: // Fiberglass Grating – .com ໄດ້ pitting ຫລວງທໍ່ຫລວງ.
ໃນ FaceBook: Www.facebook.com/GratingThai, Www.facebook.com/FrpFiberGrating.chancon, Www.facebook. .com ໄດ້ / FrpGrating.ManholeCover
ໄດ້ຢູ່ທູບ: Http://www.youtube.com/mktchancon, Http://www.youtube.com/FRPGratingFiberglass
TwitterShare: Https://twitter.com/GratingThai Https://plus.google.com. / + ChanconTh
Premium Manhole Grating Specialist | ກໍາລັງໄຟຟ້າຂອງເສັ້ນໃຍສັງເຄາະ fiberglass mesh ຢູ່ແຄມແຂນ. FRP-FIBERGLASS STEEL Plastic GRATING | ຖະຫນົນຍ່າງ ຫນຽວ, ສຽງໂຫວດທັງຫມົດທາດເຫຼັກ manholes COVER | ລອຍນ້ໍາຫລາຍເກີນບາຍນ້ໍາ Gully Gutter Grating | ຄລິບລັອກເລືອກຍຶດແຜ່ນ sieve anchoring ອຸປະກອນທີ່ຕິດຄັດມາ Saddle ແກ້ໄຂ Clip Clamp Lock Fastenal Fastener Bar Steel Grating | ເສຍຈັ່ນຈັບ sieve ໃບດ້ານຄວບຄຸມຕາມ sidewalk ບາດວິຖີບາຍນ້ໍາ Grating. Scupper | Egg ຜ້າມ່ານກະດານ Crate slatted ປີ້ງ separates ຕັນຫນ້າກາກໄຟຮົ່ມແສງສະຫວ່າງ decorate ຂອງຕູ້ປາ | ກວມເອົາດັງຂອງທ່ານໃນໄລຍະແຂບ trim ໄດກະດານການປົກຫຸ້ມຂອງ. ແຜ່ນພື້ນຜິວພື້ນເສັ້ນໃຍຄວາມຜິດພາດພຽງແກ້ວ FRP Stair Tread ດັງຂັ້ນຕອນປົກ Protector: FRP ຕ້ານຄວາມຜິດພາດພຽງ Gritted Plate ແຜ່ນ | plank Winnipeg ຄະນະເຫຼັກ perforated ກໍາແພງ hook ສາຍສຽງວົງເລັບແບບປຸ Pegboard Hook Shelves ເຄື່ອງມື Racking ການເກັບຮັກສາ. DIY Kit | wwwchanconcoth | http: // GratingThaicom | http: // GratingThaicomau | http: // Fiberglass Grate-Steel Pipe Lid | com @ Line: @iCHANCON / Line (iD): iCHANCON | ມືຖື (ຂາຍ): 081 932 7894,061 647 0184-6 ໂທ: 02 451 0780-1
ကျဇယားသံ Manhole အဖုံး (က Round / ရင်ပြင်မှာ) ဦးထုပ်အဖုံးကျဇယားသံ manholes, precast မိလ္လာကန်စနစ်များကိုနှငျထုတျစှနျ့ကွနှငျ့။ (က Round / စတုရန်း)
ကိုးကား ” ကျဇယားသံပစ်ရေတွင်းပိုက်ထုပ်ကျဇယားစံသံ Manhole အဆိုပါဖုံးစျေးနှုန်း: Casting 1) , သံများအတွက်ကျဇယား Cast အဆင်သင့်အတွက်အဆင့် 500-7, EN124: နျ Standard ကျဇယား၏လုပ်ပစ္စည်းသံကိုသွန်းလေ၏။ခွန်အားကိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, သမားရိုးကျမီးခိုးရောင်သွန်းသံထက်ခိုင်မာခြင်း။ တူညီသောပစ္စည်းများ၏အဆင့်ဆင့်လျော့နည်းအသုံးပြုသည်။ ပိုမိုပေါ့ပါး Make ထက်လွယ်ကူသောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု 2) Options ကို ,: အဆိုပါ H ကို = hinge အမှတ် L ကို, အရင်း = key-သော့ခတ်အဖုံးသော့ခတ်, R ကို = ရော်ဘာတံဆိပ်တစ်ဦးကတံဆိပ်ကိုရော်ဘာအနံ့ပိုမိုသိရှိလိုပါက 3): တစ်ဦးချင်းစီမော်ဒယ်စျေးနှုန်းအသေးစိတ်ကိုမေးမြန်းထားတဲ့အီးပေးပို့နိုင်ပါသည် ကုမ္ပဏီ၏အရောင်းဌာန -mail သို့မဟုတ်ဆက်သွယ်ပါ။
ကျဇယားသံရဆေိုး Manhole ဖုံးယိုစီးမှုသို့ကာစ် ဖုံးရေကန် scum ကျဇယားသံပိုက်များကိုသွန်းလေ၏။ Clover လူကိုအပေါက်
ကျဇယားသို့ကာစ်သံ Manhole အဖုံး (Spherioid ခဲနက်ရောင်သံသို့မဟုတ် Nodular Cast ကိုပစ်ချပြီးပုံသွင်းလွယ်အလင်းဆုံဖိုက်သံချပစ် သံသို့မဟုတ်ကျဇယားသံ Cast သုံးရန်) ကျဇယား၏ဖန်ဆင်းရေတွင်းပိုက်ပယ်ဦးထုပ်သံကိုသွန်းလေ၏။ အဆိုပါတမ်-ခံနိုင်ရည်သွန်းသံ မြင့်မားသောသက်ရောက်မှုတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိ ဒါဟာသမားရိုးကျမီးခိုးရောင်သွန်းသံထက် ပို. ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သည်။ အဆိုပါပေါ့ပါးမီးခိုးရောင်သံကိုသွန်းလေ၏။ ထက်ပိုမိုလွယ်ကူပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမဖွင့်စေသည်
ကျဇယားသံ Manhole ထိပ်အကြီးအကျယ်အသုံးပြုကြသည်သို့ကာစ် ထိုသို့သောလမ်း, ပန်းခြံ, စတုရန်းအဖြစ်ပြည်တွင်းရှိသို့မဟုတ်ပြည်ပမှာမြို့စီမံကိန်းတည်ဆောက်ရေး၌။ သူတို့ကရေနုတ်မြောင်းအင်ဂျင်နီယာ, ပါဝါထောက်ပံ့ရေးနှင့် telcom ဆက်သွယ်ရေးစီမံကိန်းလည်းသက်ဆိုင်ပါသည်။ အဆိုပါဆန်းသစ်ရုပ်သံလိုင်းရေနုတ်မြောင်း၏ပြီးပြည့်စုံသောအကွာအဝေး စနစ်များကိုစက်မှုဇုန်, dock သို့မဟုတ်လေဆိပ်အသုံးပြုမှုမှတဆင့်ပြည်တွင်း uage ကနေအားလုံး applicationtypes ကိုဖုံးလွှမ်း။
1) ကျဇယား Cast အဆင်သင့်သံများအတွက်အဆင့် 500-7, EN124: နျ Standard ကျဇယားသွန်းသံနဲ့လုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်း။ ခွန်အားကိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, သမားရိုးကျမီးခိုးရောင်သွန်းသံထက်ခိုင်မာခြင်း။ တူညီသောပစ္စည်းများ၏အဆင့်ဆင့်လျော့နည်းအသုံးပြုသည်။ ပိုမိုပေါ့ပါး Make ထက်လွယ်ကူသောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု
2) Options ကို ,: အဆိုပါ H ကို = hinge အမှတ်အရင်း, L ကို = key-သော့ခတ်အဖုံးသော့ခတ်, R ကို = ရော်ဘာတံဆိပ်ဖျံရော်ဘာအနံ့ဖြစ်ကြသည်။
ကျဇယား Cast ကိုသံ Manhole Cover Specification ထိုလူအပေါက်အဖုံးဖုံးရေကန်ရေနုတ်မြောင်းပိုက်။
ကျဇယားသံက Round Manhole Cover 350mm သို့ကာစ်။ B125
ဦးထုပ်ရေတွင်းများကျဇယား 12.5 တန်ချိန် 35 စင်တီမီတာနဲ့ကိုယ်အလေးချိန်တိုင်းသံနယ်ပယ်ကိုသွန်းလေ၏။
ကျဇယားသံက Round Manhole Cover 500mm သို့ကာစ်။ A15
ရေတွင်းများကျဇယား 1.5 တန်ချိန် 50 စင်တီမီတာနဲ့ကိုယ်အလေးချိန်တိုင်းသံနယ်ပယ်ကိုနှင်ထုတ်ဦးထုပ်။
ကျဇယားသံက Round Manhole Cover 600mm သို့ကာစ်။ A15
ရေတွင်းများကျဇယား 1.5 တန်ချိန် 60 စင်တီမီတာနဲ့ကိုယ်အလေးချိန်တိုင်းသံနယ်ပယ်ကိုနှင်ထုတ်ဦးထုပ်။
ကျဇယားသံက Round Manhole Cover 600mm သို့ကာစ်။ B125
ဦးထုပ်ရေတွင်းများကျဇယား 12.5 တန်ချိန် 60 စင်တီမီတာနဲ့ကိုယအလေးချိန်တိုင်းသံနယ်ပယ်ကိုသွန်းလေ၏။
ကျဇယားသံက Round Manhole Cover 600mm သို့ကာစ်။ C250
ကျဇယား၏အဖုံး 60 စင်တီမီတာနဲ့ကိုယ်အလေးချိန် 25 တန်ချိန်တိုင်းတာခြင်းသံမြို့ပတ်ရထားရေကန်ကိုသွန်းလေ၏။
ကျဇယားသံက Round Manhole Cover 600mm သို့ကာစ်။ D400
ကျဇယား၏အဖုံး 60 စင်တီမီတာနဲ့ကိုယ်အလေးချိန် 40 တန်ချိန်တိုင်းတာခြင်းသံမြို့ပတ်ရထားရေကန်ကိုသွန်းလေ၏။
ကျဇယားသံက Round Manhole Cover 800mm သို့ကာစ်။ A15
ရေတွင်းများကျဇယား 1.5 တန်ချိန် 80 စင်တီမီတာနဲ့ကိုယ်အလေးချိန်တိုင်းသံနယ်ပယ်ကိုနှင်ထုတ်ဦးထုပ်။
ကျဇယားသံက Round Manhole Cover 800mm သို့ကာစ်။ B125
ဦးထုပ်ရေတွင်းများကျဇယား 12.5 တန်ချိန် 80 စင်တီမီတာနဲ့ကိုယ်အလေးချိန်တိုင်းသံနယ်ပယ်ကိုသွန်းလေ၏။
ကျဇယားသံက Round Manhole Cover 800mm သို့ကာစ်။ C250
ကျဇယား၏အဖုံး 80 စင်တီမီတာနဲ့ကိုယ်အလေးချိန် 25 တန်ချိန်တိုင်းတာခြင်းသံမြို့ပတ်ရထားရေကန်ကိုသွန်းလေ၏။
ကျဇယားသံက Round Manhole Cover 800mm သို့ကာစ်။ D400
ကျဇယား၏အဖုံး 80 စင်တီမီတာနဲ့ကိုယ်အလေးချိန် 40 တန်ချိန်တိုင်းတာခြင်းသံမြို့ပတ်ရထားရေကန်ကိုသွန်းလေ၏။
ကျဇယားသံရင်ပြင် Manhole Cover 400mm သို့ကာစ်။ B125
ကျဇယား၏အဖုံး 12.5 တန်ချိန် 40 စင်တီမီတာနဲ့ကိုယ်အလေးချိန်တိုင်းသံစတုရန်းရေကန်ကိုသွန်းလေ၏။
ကျဇယားသံရင်ပြင် Manhole Cover 600mm သို့ကာစ်။ B125
ကျဇယား၏အဖုံး 12.5 တန်ချိန် 60 စင်တီမီတာနဲ့ကိုယ်အလေးချိန်တိုင်းသံစတုရန်းရေကန်ကိုသွန်းလေ၏။
ကျဇယားသံရင်ပြင် Manhole Cover 700mm သို့ကာစ်။ B125
ကျဇယား၏အဖုံး 12.5 တန်ချိန် 70 စင်တီမီတာနဲ့ကိုယ်အလေးချိန်တိုင်းသံစတုရန်းရေကန်ကိုသွန်းလေ၏။
ကျဇယားသံရင်ပြင် Manhole Cover 800mm သို့ကာစ်။ B125
ကျဇယား၏အဖုံး 12.5 တန်ချိန် 80 စင်တီမီတာနဲ့ကိုယ်အလေးချိန်တိုင်းသံစတုရန်းရေကန်ကိုသွန်းလေ၏။
Frame ကတပ်ဆင် Method ကိုအတူရဆေိုးယိုစီးမှု Manhole Cover ။
တစ်ဦးအဖုံးလူကိုအပေါက်အဖုံးဖုံးရေကန်ရေနုတ်မြောင်းပိုက်ကင်အဖုံးကို install လုပ်နည်း။ ရှိပြီးသား ချ. ရေကန်လည်ပင်းလျှင်။ ကွန်ကရစ် formwork ကိုထောကျပံ့ဖို့အဲဒီလိုလုပ်ဖို့။ ထိုအခါ Somerset Levels နဲ့လုပ် frame ကိုသို့ချောင်းတွေ welding ။
1. မြေပြင်နှင့်အတူအဆင့်ကိုရေးဆွဲရန် Somerset Levels နဲ့ဘောင်နဲ့အတူ frame ကို Install လုပ်ပါ။ သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံမှာအတူတကွနှင့်ထောင့်ဖြတ်ခွန်အားဖြည့်လည်ပင်းရေကန်မှ welded ခံခဲ့ရသည်
တစ်ဦးထုပ်သို့မဟုတ်အပေါက်ကိုအဖုံး manholes frame ကိုဆန့်ကျင်တင်းကျပ်စွာပိတ်နေတဲ့လူကို Wear
2. ။ ထိုအခါအဖုံးကိုထပ်အမြဲကြမ်းပြင်ပေါ်မှာတစ်လိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဘိလပ်မြေကွန်ကရစ်ခင်မှာ
လှပတဲ့ရေကန်ဖို့ bezel နှင့်အတူ
3. ကွန်ကရစ်အင်္ဂတေမျက်နှာပြင် flush ။ ကွန်ကရစ်သည်အထိစောင့်ဆိုင်း Leave
ဒီ installation ကိုနည်းလမ်းသည်လူကိုအပေါက်အဖုံးကိုတပ်ဆင်ရန်ဖြစ်ပါသည်
4 ။ သို့မဟုတ် Standard အဖြစ် manholes ကိုဖုံးလွှမ်း။
ဖွင့်လှစ်-နီးစပ်ဖို့ကိုဘယ်လိုရဆေိုးယိုစီးမှု Manhole Cover ။
ကောင်းမွန်သော Wear ပြီးတိုက်စားမှုများကိုခုခံရှိထားသောကြောင့်ဒါဟာ JobsDB.com ကသံချေးသလားပါနဲ့ဘယ်တော့မှလိမ့်မည်: မရှိနိုင်ပါကောင်းမွန်သော Wear ပြီးတိုက်စားမှုများကိုခုခံမှာပြန်လည်အသုံးပြုသည်တန်ဖိုးကတည်းကနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်အဘယ်သူမျှမပြဿနာကိုခိုးယူ JobsDB.com တန်ဖိုး
1 .: ဒါဟာဖြေရှင်းတော်မူမည် Recover
30 ကျော်နှစ်များဒါဟာ JobsDB.com Be ပြီးတော့အသုံးပြုသောအပေါ်နိုင်သလား:
2. Long ကဝန်ဆောင်မှုဘဝက။ ဒါဟာ JobsDB.com Hermetically အသုံးပြုသောအပေါ် Be, အထိရောက်စွာ Cesspool မှစ. ထဲကပေါက်ကြား၏သူများသည်အဆိပ်ဓာတ်ငွေ့ကာကွယ်မည်နိုင်သလား: အဘယ်သူမျှမဆိုယင်းကောင်းပြီချိတ်ပိတ် 2.000.000 ပင်ပန်းနွမ်းနယ်သည့်လှုပ်ခြင်း၏အတွေ့အကြုံမှာ crack ရှိပါသလား
3. အလင်း, အလေးချိန်အမြင့်ဆန့စွမ်းဆောင်ရည်အကြောင်းတစ်ဦးအမြင့်ဝန်: စွမ်းဆောင်ရည်အကြောင်း၎င်း၏အမြင့်ဝန်အဆိုပါကျော်လွန်။ သံနှင့်အသင့်ဖြစ်ပြီလားကျဇယားသို့ကာစ်များအတွက် insulator တွင်လည်းထောက်ပံ့
4. အခမဲ့ Design-: ဒါဟာ JobsDB.com အဆိုပါဒီဇိုင်းသည်အသုံးပြုသူများရဲ့ဆိုသညျကားဝယ်လိုအားအရ Be နိုင်သလား။ အရောင်, ပုံစံ, သတ်မှတ်ချက်အဘယ်သူမျှမဆိုအပါအဝင် ရှိပါတယ်မဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်သလိုကားများဖြတ်သန်းသည့်အခါပြန်ခုန်ထွက်: စကားပြောခြင်း။
# ဖိုင်ဘာဖန်ဆန်ခါသံမဏိဆန်ခါ, ရေကန်၏အစွန်းန်းကျင်ပလပ်စတစ်ရဆေိုးလျတ်, # အဖုံး manholes ပြီးစီးသံအဖုံးများ, အပ်ချုပ်သူ, # FRP-ဖန်မျှင်ထည်သံမဏိပလတ်စတစ်ဆန်ခါ, # ကျဇယား-သို့ကာစ်-သံ MANHOLE သွန်းလေ၏။ အဖုံး, #Swimming လျှံ သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်း Gully မြောင်းဆန်ခါ, #Saddle ကလစ်ညှပ်သော့ခတ် Fastener, # optional ကိုသော့ခတ်ကလစ် # ဆန်ခါထောင်ချောက်, အထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းခြမ်းအနားမှာလမ်းဘေးအပေါ် #Egg သေတ္တာကင်ပျံ့အမှိုက်သရိုက်အရွက်, #Curbed သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်း Scupper ဆန်ခါ, ထိုဆန်ခါပန်းကန်လုံလုံခြုံခြုံ။ Divide အလင်းရောင်ငါးမွေးကန် panel ကို # panel ကိုလိုက်ကာကင်အလင်းကိုအရိပ်အလင်းအိမ်အတွက်ငါးမွေးကန်, #Stair အလှဆင်မျက်နှာဖုံးလုပ်ကွက်ခွဲခြား slat ။ နှာခေါင်းနှင့်ထောင့်တိအဖုံး panel ကိုလှေကားချော်နင်းနှာခေါင်းအဆင့်ဖုံးကာကွယ်ပေးသူ # ဖုံး, #Tree စောင့်တပ်ဖွဲ့အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးခြစ် Frame က # -frame ကင်သစ်ပင်၏အခြေစိုက်စခန်းကာကွယ်ပေးသည်, သိုလှောင်ရေး Tools များ # သံမဏိ DIY Kit ယူပြီး #Perforated Pegboard Hook စင်ပေါ် Winnipeg ဘုတ်အဖွဲ့ပျဉ်ပြား။ တန်တိုင်းရိုး၌အပေါက်သိုလှောင်မှု tools တွေဆွဲထား, စာရွက်အခင်းများနှင့်နေသောလူသွားလမ်း။
ပလပ်စတစ်ဆန်ခါရေနုတ်မြောင်းကိုနှင်ထုတ်သံ, လူမီနီယမ်, သံမဏိ, ဖိုင်ဘာဖန်, သင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့အဖုံးကိုသံအဖုံးရဆေိုးချပစ် prefabricated, FRP-ဖန်မျှင်ထည်သံမဏိပလတ်စတစ်ဆန်ခါပြီးဆုံးကျဇယား-သို့ကာစ်-သံ MANHOLE မျက်နှာဖုံး, ရေကန်၏အစွန်းန်းကျင်ဆန်ခါလျတ်။ စမ်းရေတွင်းရေကူးလျှံယိုစီးမှုကင်, frame ကိုကင်တဲ့လမ်းဘေးထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်း, # ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ဖြန့်ချိအနားမှာရှိတဲ့ Junk အစားအစာထောင်ချောက်များ၏ကင်ကိုအပိုင်းပိုင်းအပင်၏အအခြေစိုက်စခန်းကာကွယ်ပေးသည်။ ကြမ်းပြင် Mat နေသောလူသွားလမ်း, panel ကိုလိုက်ကာကင်မျက်နှာဖုံးလုပ်ကွက်အလငျး / လေကြောင်း filtration / လေဝင်လေထွက် slat ။
Manhole Manhole အဖုံးအနုပညာပုံစံများမှာစသည်တို့ကိုရဆေိုးတစ်ခုမြေအောက်ကမ္ဘာသို့ entry ကို, ရေအဓိကပါဝါ / ဆက်သွယ်ရေးလိုင်းများ, ကြားခံပေးဖုံးလွှမ်း။ သူတို့ကသာမန်အားဖြင့် ” သန့်ရှင်းရဆေိုး ‘သို့မဟုတ်’ ‘မုန်တိုင်းရဆေိုး’ ‘စာနေကြသည်ပေမယ့်အခြေခံအားဖြင့်ဘာမှစာနိုင်ပါသည်။ တစ်မြို့လိုဆန္ဒများလျှင် Manhole အဖုံးများသူတို့အပျေါမှာကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများ / ဒီဇိုင်းများရှိသည်နှင့်ပင်ထုံးစံအမှတ်တံဆိပ်။ သင်တစ်ဦးမြို့မှတဆင့်လမ်းလျှောက်နေကြသည်လာမယ့်အချိန်ကိုဆင်းကြည့်ပြီး note ကိုယူပါ။ Manhole အဖုံးများသွန်းသံကိုဖန်ဆင်းနေကြသည်။ ဤရွေ့ကားအဖုံးမော်တော်ယာဉ်များသူတို့အပေါ်မှာမောင်းအခါသူတို့သည် dislodged ဖြစ်လာကြဘူးဒါကြောင့်မိုးသည်းထန်စွာဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Manhole ပုံမှန် 100+ ပေါင်တစ်ခုချင်းစီကိုအလေးချိန်ကိုဖုံးလွှမ်း။ တချို့ကရေ manhole ရိုက်ထည့်ရန်ခွင့်ပြုသည့်ပွင့်လင်းရွေးပေါက်တွေရှိသည်။ အခြားသူများကအဖုံးသို့မဟုတ်ဓာတ်လှေကားမှတဆင့်လမ်းအပေါင်းတို့ထိုကဲ့သို့သောတစ်စက်လက်ကိုင်သို့မဟုတ်လက်စွပ်လက်ကိုင်အဖြစ်ကိုင်တွယ်သွားရမထားတဲ့ရွေးတွင်းဖုံးကွယ်ပါပြီ။ Manhole အဖုံးများကလုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်များအတွက်ဘောင်မှသော့ခတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ Manhole အဖုံးကိုလည်းအဖုံး၏အောက်ခြေပေါ်မှာ gasket ရှိသည်နှင့်ပုံမှန် watertight ထည့်သွင်းစဉ်းစားသောဘောင်မှသော့ခတ်နိုင်ပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်အများဆုံး manhole ပတ်ပတ်လည်ဖုံးလွှမ်းရှိပါသလဲ တစ်လှည့်လည်အဖုံးက၎င်း၏မြို့ပတ်ရထားအဖွင့်မှတဆင့်မကျနိုငျသောကွောငျ့ Manhole အဖုံးများပတ်ပတ်လည်ရှိပါသည်။ အဆိုပါ manhole ဖုံး frame ကိုထိုင်ခုံပေါ်ကျိန်းဝပ်; ထို့ကွောငျ့, frame ကိုဖွင့်လှစ်များ၏အချင်းဟာ manhole အဖုံးထက်သေးငယ်သည်။ အဆိုပါတွင်း၌ထောင့်ဖြတ်လှည့်လျှင်တစ်စတုရန်းသို့မဟုတ်စတုဂံ manhole အဖုံးတစ်ခုဖွင့်လှစ်မှတဆင့်လဲကျစခွေငျးငှါသွားရမည်။ ဒါဟာမြို့ပတ်ရထားအပေါက်တူးဖို့လည်းလွယ်ကူသည်။ round အဖုံးတစ်ခုံပေါ်တွင်စက်ဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူဖြစ်ကြသည်။ တစ်ဦးကလှည့်လည် manhole ဖုံးလိုအပ်လျှင်ပိုမိုလွယ်ကူရွှေ့ဖို့စေသည်သောရှင်းပြီနိုင်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်အများဆုံး manhole ပတ်ပတ်လည်ဖုံးလွှမ်းရှိပါသလဲ တစ်လှည့်လည်အဖုံးက၎င်း၏မြို့ပတ်ရထားအဖွင့်မှတဆင့်မကျနိုငျသောကွောငျ့ Manhole အဖုံးများပတ်ပတ်လည်ရှိပါသည်။ အဆိုပါ manhole ဖုံး frame ကိုထိုင်ခုံပေါ်ကျိန်းဝပ်; ထို့ကွောငျ့, frame ကိုဖွင့်လှစ်များ၏အချင်းဟာ manhole အဖုံးထက်သေးငယ်သည်။ အဆိုပါတွင်း၌ထောင့်ဖြတ်လှည့်လျှင်တစ်စတုရန်းသို့မဟုတ်စတုဂံ manhole အဖုံးတစ်ခုဖွင့်လှစ်မှတဆင့်လဲကျစခွေငျးငှါသွားရမည်။ ဒါဟာမြို့ပတ်ရထားအပေါက်တူးဖို့လည်းလွယ်ကူသည်။ round အဖုံးတစ်ခုံပေါ်တွင်စက်ဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူဖြစ်ကြသည်။ တစ်ဦးကလှည့်လည် manhole ဖုံးလိုအပ်လျှင်ပိုမိုလွယ်ကူရွှေ့ဖို့စေသည်သောရှင်းပြီနိုင်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်အများဆုံး manhole ပတ်ပတ်လည်ဖုံးလွှမ်းရှိပါသလဲ တစ်လှည့်လည်အဖုံးက၎င်း၏မြို့ပတ်ရထားအဖွင့်မှတဆင့်မကျနိုငျသောကွောငျ့ Manhole အဖုံးများပတ်ပတ်လည်ရှိပါသည်။ အဆိုပါ manhole ဖုံး frame ကိုထိုင်ခုံပေါ်ကျိန်းဝပ်; ထို့ကွောငျ့, frame ကိုဖွင့်လှစ်များ၏အချင်းဟာ manhole အဖုံးထက်သေးငယ်သည်။ အဆိုပါတွင်း၌ထောင့်ဖြတ်လှည့်လျှင်တစ်စတုရန်းသို့မဟုတ်စတုဂံ manhole အဖုံးတစ်ခုဖွင့်လှစ်မှတဆင့်လဲကျစခွေငျးငှါသွားရမည်။ ဒါဟာမြို့ပတ်ရထားအပေါက်တူးဖို့လည်းလွယ်ကူသည်။ round အဖုံးတစ်ခုံပေါ်တွင်စက်ဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူဖြစ်ကြသည်။ တစ်ဦးကလှည့်လည် manhole ဖုံးလိုအပ်လျှင်ပိုမိုလွယ်ကူရွှေ့ဖို့စေသည်သောရှင်းပြီနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါတွင်း၌ထောင့်ဖြတ်လှည့်လျှင်တစ်စတုရန်းသို့မဟုတ်စတုဂံ manhole အဖုံးတစ်ခုဖွင့်လှစ်မှတဆင့်လဲကျစခွေငျးငှါသွားရမည်။ ဒါဟာမြို့ပတ်ရထားအပေါက်တူးဖို့လည်းလွယ်ကူသည်။ round အဖုံးတစ်ခုံပေါ်တွင်စက်ဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူဖြစ်ကြသည်။ တစ်ဦးကလှည့်လည် manhole ဖုံးလိုအပ်လျှင်ပိုမိုလွယ်ကူရွှေ့ဖို့စေသည်သောရှင်းပြီနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါတွင်း၌ထောင့်ဖြတ်လှည့်လျှင်တစ်စတုရန်းသို့မဟုတ်စတုဂံ manhole အဖုံးတစ်ခုဖွင့်လှစ်မှတဆင့်လဲကျစခွေငျးငှါသွားရမည်။ ဒါဟာမြို့ပတ်ရထားအပေါက်တူးဖို့လည်းလွယ်ကူသည်။ round အဖုံးတစ်ခုံပေါ်တွင်စက်ဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူဖြစ်ကြသည်။ တစ်ဦးကလှည့်လည် manhole ဖုံးလိုအပ်လျှင်ပိုမိုလွယ်ကူရွှေ့ဖို့စေသည်သောရှင်းပြီနိုင်ပါသည်။
ကျဇယားသံ Manhole Cover ဦးထုပ်ပြီးပုံသွင်းလွယ်သံကိုနှင်ထုတ်စှနျ့ကွနှငျ့။ ကျဇယား၏ဖန်ဆင်းထိုင်းနိုင်ငံအတွက် certified ရရှိထားပြီးအဖွဲ့အစည်းများထံမှစံ EN124 စမ်းသပ်မှုရလဒ်များအရသိရသည်ထုတ်လုပ် (ကျဇယားသံ Cast သုံးရန်) သံကိုသွန်းလေ၏။ 2-40 တန်ချိန်နှစ်ဦးစလုံးဗားရှင်းပတ္ရှိသည်နှင့်ခိုးမှုကာကွယ်တားဆီးဖို့သော့ခတ်တော်တော်များများရဲ့အရည်အသွေးအဆင့်အနေဖြင့်ရွေးချယ်ပါ။ installation ပြီးလွယ်ကူပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစျေး 1 ကိရိယာအစုံဖိုက်ဘာမှန်ဘောင်နှင့်အတူအားဖြည့် FRP Manhole Cover အဖုံး manholes, အတူ bezel ဘောင်ပါဝင်သည်။ ဖိုင်ဘာနဲ့လုပ်ထားတဲ့ပလပ်စတစ် FRP စံ EN124 သွန်းသံ, ကျဇယားအစှမျးသတ်တိနဲ့တူသံချေးမရအားဖြည့်။ လှလှပပသဘောသဘာဝနှင့်အတူ 2-40 တန်ချိန်ကနေရွေးချယ်ပါ။ ဈေးကွက်ထဲမှာလူကြိုက်များသည်မဟုတ်ခိုးယူရှေးဟောင်းပစ္စည်းခဲ့ကြပြီ။
ပျဉ်ပြား, အပေါက်တွေ, ရေ, သံမဏိဝါယာကြိုး, jig အပေါက်, ဆန့်သံမဏိ, ကာဗွန်ဖိုက်ဘာ, texture trotters, ကြက်သားသီချင်းများခေါက်, ဖြတ်အတူလမ်းဘေးရဲ့အစွန်းတစ်လျှောက်တွင်စင်္လှံတံရွှေ့ပြောင်းခံရဦးရေနုတ်မြောင်းမြောင်း, matrix ကိုပျက်ကွက်, ဝါယာကြိုးကွက်, ဝါယာကြိုးကွက်။ ရေနုတ်မြောင်း, Anti-စလစ်ခြေလှမ်းများ, သံလမ်း, အနံ့ကြောင့် mini ကိုအသားတင်ပြင်ပလမ်းခင်းပိတ်ပင်တားဆီးမှု။ Weir အဆိုပါလမ်းဘေးရဲ့အစွန်းမှာရေထဲမှာမျောကင်ဖြီးထောင်ချောက်အပျက်အစီးများခွဲ။ အနည်အနှစ်များထောင်ချောက်ဖုန်မှုန့်, အရွက်, စက္ကူ, စားသောက်ကုန်စွန့်ပစ်သည့်ကင်ရေကိုထိန်းချုပ်ရန်။ အဆိုပါလမ်းဘေးတစ်လျှောက်တွင်ဘေးထွက်သံလမ်း, မြှို့နယ်၏စံသတ်မှတ်ချက်အရသိရသည်။ ပြည်သူ့လုပ်ငန်းဌာနနှင့်မြို့စီမံကိန်း ကျေးလက်လမ်းများဦးစီးဌာန အမျိုးသားအိမ်ရာအာဏာပိုင် ETA, Key ကိုရုပ်သိမ်းရဆေိုးယိုစီးမှု manhole အဖုံး, တုတ်ကျင်းရေနုတ်မြောင်းသည့်ကားလမ်းခြစ်, footbath အနီးရှိဆန်ခါဖုန်မျက်နှာပြင်သည့်ကားလမ်း, အရွက်ထောင်ချောက်ဆင်လုံခြုံယိုစီးမှုအသွားအလာကိုခြစ်။
ဦးထုပ်တွေစစ်ထုတ်ဖို့အတွက် ကိုခေါ်ဖုံး manholes, ပိုက်, ပိုက်ထုပ်တစ်ထုပ်ဖြစ်ပါသည်, ဦးထုပ်ပိုက်လိုင်းပိတ်များအတွက်အသုံးပြုသည်။ ဘယ်တစ်ခုလုံးကိုပိုက်ထုပ်, ရေနုတ်မြောင်း, လျှပ်စစ်စနစ်များနှင့်စွန့်ပစ်ရေကုသမှုများအတွက်အသုံးပြုပိုက်ကိုဖုံးလွှမ်း။ ဘယ်လိုအသုံးဝင်ပိုက်ထုပ် အသှငျပွောငျးနိုင်ငံခြားကိစ္စကိုတားဆီးကိုကူညီပေးဖို့ပိုက်ဖုံးအုပ်ထားပါ။ ဆိုးရွားသောကျဆုံးခြင်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအလုပ် enable လုပ်ဖို့အဆောက်အပေးပါသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ပိုက်ထုပ်ကိုလည်းပြီးသားအဖြစ်ကောင်းစွာ install လုပ်ဧရိယာမှအလှတရားကထပ်ပြောသည်။ ပိုက်ထုပ်၏ဤအမျိုးအစား ပစ္စည်းအားဖြင့်ပိုက်ထုပ်: အပိုက်နှစ်ခုအဓိကအမျိုးအစားတစ်ခုသို့ကွဲပြားဖုံးအုပ်ထားပါ။ ကွန်ကရစ်လုပ်ထားတဲ့အဖုံးပိုက် မီးခိုးရောင်သွန်းသံကနေထုတ်လုပ် cover ပိုက်။ စုပေါငျးဖိုင်ဘာကနေဖန်ဆင်းတော်ပိုက်မျက်နှာဖုံး။ ကျဇယားသွန်းသံ B ကိုဖန်ဆင်း cover ပိုက်: ပိုက်ထုပ်အခြေပြု application ။ ရေနုတ်မြောင်းအတှကျအသုံးပွုပိုက်ဖုံးအုပ်ထားပါ။ တွင်းသို့နိုင်ငံခြားအလောင်းတွေတားဆီးအတှကျအသုံးပွုပိုက်ဖုံးအုပ်ထားပါ။
တစ်ဦးက manhole အဖုံးအတွက်ကျသွားရာမှမည်သူမဆိုသို့မဟုတ်ဘာမှမတားဆီးဖို့, ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲလူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ပစ္စည်းထုတ်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်, တစ်ဦး manhole ၏အဖွင့်ကျော်အဖုံးဖွဲ့စည်းဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့ပန်းကန်ဖြစ်ပါတယ်။ Manhole အဖုံးများမကြာခဏသွန်းသံ, ကွန်ကရစ်သို့မဟုတ်နှစ်ခုပေါင်းစပ်ထဲကလုပ်နေကြသည်။ ဒါဟာသူတို့ကို, စျေးသိပ်မကြီးတဲ့ခိုင်မာတဲ့နှင့်မိုးသည်းထန်စွာစေသည်။ အဆိုပါအလေးချိန်အသွားအလာသူတို့အပေါ်မှာဖြတ်သန်းတဲ့အခါမှာအရပျ၌သူတို့ကိုစောင့်ရှောက်ရန်ကူညီပေးသည်, ထိုသို့ခက်ခဲခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲလူတွေသူတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်သင့်လျော်သော tools များရှိခြင်းမဟုတ်စေသည်။ Manhole အဖုံးများမှာလည်း (အဖုံးခိုးယူစိုးရိမ်စရာသည်အဘယ်မှာရှိ) ဖန်ခွက်-အားဖြည့်ပလတ်စတစ်သို့မဟုတ်အခြားပေါင်းစပ်ပစ္စည်းအနေဖြင့်ဆောက်လုပ်နိုင်ပါသည်။ လက်ခံနိုင်ဖွယ်လက်စွဲစာအုပ်ကိုင်တွယ်လေးကန့်သတ်ဥပဒေလည်း သာ. ကွီးမွတျစလစ်ခုခံခြင်းနှင့်လျှပ်စစ်လျှပ်ကာဂုဏ်သတ္တိများ၏အကျိုးကျေးဇူးများရှိသည်သောပေါ့ပါးအလေးချိန်ပေါင်းစပ် manhole ဖုံးပစ္စည်းများ, ၏ကြောင့်ဖြစ်သည်။ တစ်ဦးက manhole ဖုံးသတ္တုအခြေစိုက်စခန်းပေါ်မှာထိုင် ,. မျက်နှာဖုံးကိုက်ညီသောသေးငယ် inset အနားကွပ်အတူ။ သူတို့များသောအားဖြင့်တစ်ဦးသတ္တုများပုံသွန်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အားဖြင့်လုပ်နေကြသည်ဖြစ်သောကြောင့်အဆိုပါအခြေစိုက်စခန်းနှင့်ဖုံးတစ်ခါတစ်ရံတွင်ပုံမှန်အားဖြင့်သဲ-casting နည်းစနစ်, “Cast” ဟုခေါ်ကြသည်။
အဆိုပါအဖုံးများများသောအားဖြင့်တစ်ချိတ်လက်ကိုင် tool ကိုသူတို့ကိုရုတ်သိမ်းပေးရန်ဖြည့်စွက်ထားတဲ့သို့, “တွင်းကောက်” ပါရှိပါတယ်။ တွင်းပိုမို watertight အဖုံးအဘို့ဝှက်ထားနိုင်တယ်, ဒါမှမဟုတ်အလင်းမှတဆင့်ထွန်းလင်းခွင့်ပြုနိုင်ပါတယ် Pick ။ သည်အခြား tools တွေနဲ့ electromagnetic အပါအဝင်အဖြစ်ကောင်းစွာသုံးနိုငျသော်လည်းတစ်ဦးက manhole ရွေးသို့မဟုတ်ချိတ်ပုံမှန်အားဖြင့်သူတို့အားရုတ်သိမ်းပေးရန်အသုံးပြုသည်။ အဆိုပါအဖုံးကိုအလွယ်တကူစုဆောင်းဖြစ်ကြီးလွန်းပေမယ့်, သူတို့ရဲ့နေရာတိုင်းတွင်တွေ့နေကြားနေရနှင့်သူတို့အပျေါမှာပုံနှိပ်အများအပြားပုံစံများနှင့်ဖော်ပြချက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှအဖုံးများ၏ဓာတ်ပုံများကိုစုဆောင်းဖို့တချို့လူတွေဦးဆောင်လျက်ရှိသည်။ Remo Camerota, Drainspotting ခေါင်းစဉ်အကြောင်းအရာအပေါ်တစ်ဦးစာအုပ်၏စာရေးသူအဆိုအရ၎င်းတို့၏အလေးချိန်နှင့်ခက်ခဲသည့်ကိစ္စသဘောသဘာဝနေသော်လည်း manhole အဖုံးများတစ်ခါတစ်ရံတွင်သတ္တုစျေးနှုန်းများမြင့်တက်အထူးသဖြင့်အခါ, များသောအားဖြင့်အပိုင်းအစအဖြစ် Reseller ပေးတဲ့အဘို့, ခိုးယူနေကြသည်။
အဘယ်ကြောင့်ပုံမှန်အားဖြင့်, အဆိုပါ Shape Shape သည် manhole ပု၏ရှေ့သို့ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမျက်နှာဖုံးများအဆိုပါအကြောင်းရင်းပတ်ပတ်လည်အထူးပါဝင်သည်န:
အဆိုပါတစ်ဦးက Shape ပတ်ပတ်လည်, manhole ဖုံး Square ကိုမေလထဲမှာ manhole ဖုံးကျဆုံးခြင်းသွားရမည်ယင်း၏ဖွင့်ပွဲ, တစ်ဦးကဆိုင်တွေမှာက၎င်း၏မြို့ပတ်ရထားမှတဆင့် Fall မဟုတ်နိုင်ပါက INSERT လုပ်ပါလျှင်ထောင့်ဖြတ်အပေါက်ဂေါက်ကွင်းရှိကြ၏။ ကိုင်ဆောင်တဲ့ “နှုတ်ခမ်း” ၏တည်ရှိမှု အဖုံးဖွင့်ကတခြားပုံစံမျိုးစုံလောက်အံ့သောငှါဒါနောက်ခံအပေါက်, အဖုံးထက်သေးငယ်ကြောင်းဆိုလိုသည်။ (အဆိုပါတစ်ဦးက Reuleaux တြိဂံသို့မဟုတ် constant အကျယ်အနက်တပတ်ရစ်အခြား Curve Add ဒါ့အပြင်ဒီရည်ရွယ်ချက်အမှုတော်ကိုထမ်းရွက်ဒါပေမယ့်အများကြီးထုတ်လုပ်ပိုလွယ်သလားနေပတ်ပတ်လည်အဖုံးပုံဖော်ပေးနိုင်မလား။ )
က Round ဆက်သွယ်ပါ Tube အဆိုပါချုံ့ဆန့်ကျင်နျဆုံးပြီးတော့အများစုမှာပစ္စည်းချွေ Shape Are Are သူတို့ကိုခန့်ကိုမြေကြီးပေါ်မှာဖြစ်ပါသည်, ထိုအ Sotho အဘိဓါန်ကြောင့်သလားဖြစ်ပါတယ်။ တစ်လှည့်လည်ပြွန်များ၏မျက်နှာဖုံးသဘာဝ တစ်ဦးမြို့ပတ်ရထားပုံသဏ္ဍာန်ယူဆ။
တစ်ဦးကလှည့်လည် manhole ဖုံးသေးငယ်တဲ့မျက်နှာပြင်ရှိပြီး ပစ္စည်းအောက်ပိုင်းကုန်ကျစရိတ်အဓိပ်ပာယျ, အ manhole အဖုံးကိုနှင်ထုတ်ဖို့လိုအပ်အရှင်လျော့နည်းတစ်စတုရန်းတစ်ဦးထက်။
manhole ဘောင်များနှင့်အဖုံး၏ဝံမျက်နှာပြင်များ ပြားချပ်ချပ်အာမခံနှင့်ယာဉ်အသွားအလာများက dislodged ဖြစ်လာမှသူတို့ကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ machine ဖြစ်ကြသည်။ round Cast သုံးပြီးစက်ကိုအများကြီးပိုလွယ်များမှာ တစ်ခုံ။
မြို့ပတ်ရထားအဖုံးများလှည့်ခံရဖို့မလိုအပ်ပါဘူး ဟာ manhole နှင့်အတူ align ရန်။
တစ်ဦးကလှည့်လည် manhole အဖုံးကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာရနိုင် ရှင်းပြီခံရသဖြင့်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
တစ်ဦးကလှည့်လည် manhole အဖုံးကိုအလွယ်တကူသော့ခတ်ထားနိုင်ပါတယ် သူတို့ကိုခက်ခဲအထူး tool ကိုမပါဘဲဖွင့်လှစ်ဖို့ကိုလေးပုံတစ်ပုံအလှည့် (ပြင်သစ်ကဲ့သို့သောနိုင်ငံများတွင်၌ပြစ်မှားမိသည်ကိုအဖြစ်), နှင့်အတူအရပ်ဌာန၌တည်၏။ Lockable အဖုံးကိုဖန်ဆင်းခံရဖို့ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး သူတို့အပေါ်မှာအသွားအလာသွားတာစုတ်ယူခြင်းအားဖြင့်သူတို့ကိုချီကြွမနိုင်သောကြောင့်အဖြစ်မိုးသည်းထန်စွာ။
လှည်းရထားလမ်း, manhole manhole မျက်နှာဖုံးများမျက်နှာဖုံးများ, အ Rectangular & Square ကိုဒီ / လမ်းဆုံမြို့ပတ်, စီးပွားရေးကျဆင်းမှု, manhole မှတယ်လီကွန်းမျက်နှာဖုံးများမျက်နှာဖုံးများ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ & ဖုံးလွှမ်း manhole, Air လေကြောင်းလိုင်းအဖြစ်စစ်ဆေးရေးနေရာမှာလည်းတစ်ဦး Catch တစ်ဦးကိုထိန်းချုပ်ရန်အတွက်ဝှမ်းမျက်နှာဖုံးများမျက်နှာဖုံးများသဘောတူယိုစီးမှု, အဆိုပါ Surface ကသေတ္တာရှည် manhole ။
Manhole အဖုံးများသွန်းသံမှထွက်လုပ်နေကြတယ်။ သို့ကာစ်သံသံအရည်ကျိုပြီးတော့သွန်းလောင်း, သို့မဟုတ်သွန်း, တစ်ဦးမှိုသို့ကြောင်းဆိုလိုသည်။ ပုံမှန် manhole အဖုံးများမီးခိုးရောင်သွန်းသံသုံးပြီးချပစ်နေကြသည်။ ကျဇယားဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ သာ. ကြီးအစွမ်းသတ္တိ၏, သံပစ်လေယာဉ်ပျံဆိပ်ကမ်းအနီးတွေ့ရှိရလိမ့်မယ်လို့သူကဲ့သို့အထူး manhole အဖုံးများ, များအတွက်အသုံးပြုသည်။ မီးခိုးရောင်သံဒြပ်စင်သံနှင့်အလွိုင်းဒြပ်စင်ကာဗွန်နှင့်ဆီလီကွန်ပါဝင်ပါသည်သွန်းလေ၏။ အဆိုပါအလွိုင်းအေးဂျင့်များ, အထူးသဖြင့်ကာဗွန်, သွန်းပေး၎င်း၏အစွမ်းသတ္တိ, ကြာရှည်ခံမှုမီးပူ။ ကျဇယားသံသွန်းသောသံမှမန်းဂနိစ်ထည့်သွင်းထုတ်လုပ်နေသည်ကိုသွန်းလေ၏။ အဆိုပါမန်းဂနိစ်က၎င်း၏ သာ. ကွီးမွတျအစှမျးသတ်တိနှငျ့ပျော့မီးပူကျဇယားသွန်းပေးခြင်း, nodules အစားအလွှာဖွဲ့စည်းရန်သံထဲမှာကာဗွန်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သံအပြင်, manhole အဖုံးစေရန်လိုအပ်သောအခြားကုန်ကြမ်းရွှံ့နှင့်အတူခညျြနှောငျသဲသောအစိမ်းရောင်သဲဖြစ်ပါတယ်။ အစိမ်းရောင်သဲသွန်းသောသံသွန်းလောင်းသောထဲသို့မှိုထုတ်လုပ်ရန်အသုံးပြုသည်။ အဆိုပါသဲအရောအနှောအကြောင်းကို 90% silica သဲ, 4-10% ရွှံ့, 2-10% Organization (ဥပမာ, ကျောက်မီးသွေး), နှင့် 2-5% ရေပါဝင်ပါသည်။ အဆိုပါသဲအစိမ်းရောင်ရောင်စုံမပေးပါ။ အစိမ်းရောင်ကသတ္တုများပုံသွန်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကာလအတွင်းစိုစွတ်သောဆက်လက်ခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်းဆိုတဲ့အချက်ကိုရည်ညွှန်းသည်။
Kanalizasyon, သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်း Manhole အဆိုပါဖုံး Design- အရိုးရှင်းဆုံးမှအဆုံးမရနိုင်ပါဘူးရန်တိုင်း, manhole ဖုံး, ပထမဦးစွာခုနှစ်တွင် Wood ကရဲ့လုပ်ပါတယ်သို့မဟုတ် Chassis ကိုလူမီနီယမ် Add ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါမော်ဒယ်မှိုစေရန်အသုံးပြုသည် သွန်းသောသွန်းသံသွန်းလောင်းခြင်းကိုခံရလတံ့သောစ။ အဆိုပါဖန်တီးခဲ့ကြကြောင်းအဆိုပါဒီဇိုင်းများကို ပု manholes ၏မျက်နှာပြင်သူတို့ကိုနေသူများကဖန်တီးသောသူကျွမ်းကျင်သိမ်းသွားလေ၏သကဲ့သို့မတူညီဖြစ်ကြသည်။ တစ်လှည့်လည်သောကြောင့်, အားလုံး manhole အဖုံးများပတ်ပတ်လည်ရှိပါသည် အရာဝတ္ထုတူညီသောအချင်းတစ်လှည့်လည်တွင်းထဲသို့ကျဆင်းသွားမရနိုင်ပါ။ ၏အလေးချိန်ကတည်းကဒါဟာအရေးကွီး၏ manhole လွယ်ကူစွာကအောက်မှာရပ်နေတဲ့အလုပ်သမားကိုသတ်နိုင်ဘူး။ round manhole အဖုံးကိုလည်းရွှေ့ဖို့ပိုမိုလွယ်ကူများမှာ သူတို့ရှင်းပြီနိုင်ပါတယ်အဖြစ်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာလှည့်ပတ်။ အဲဒီမှာစတုဂံ utility ကိုသေတ္တာအဖုံးများဖြစ်ကြပေမယ့် သူတို့ manholes ကျော် installed ကြသည်မဟုတ်။
Grating_Manhole_Expert| ထုတ်လုပ်သူလက္ကား – လက်လီ | စုဆောင်းမှုအေးဂျင့်ကတော့အရောင်း, ကားရောင်းဝယ်ရေး ,, အဆိုပါအေးဂျင့်ခြင်း, ဖြန့်ဖြူး
CHANCON: ထိုဖြန့်ဖြူးစက်ရုံ Shannon လေဆိပ်ကုမ္ပဏီ FRP ခြစ်ဆန်ခါရေနုတ်မြောင်းရေကျင်းထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချ မှစ. တစ်ထုတ်လုပ်သူမရှိရင်ကိုညွှန်ကြား။ ဆန်ခါနေသောလူသွားလမ်း ဘိုအဖုံးဖုံးပိုက်မိလ္လာစနစ်က
CHANCON LIMITED, COMPANYSelect || GratingThai Co. , Ltd, (ရုံးဌာနမှူး, ဆန့်ကျင်ဘက်ဗဟို Rama 2) 199 Soi 21/1 ကူးရာ SMD Thian, ဘန်ကောက်, ထိုင်းထိုင်းဘန်ကောက်ဘန်ကောက်မှာ
#Mobile (ထိုအရောင်း) ။ : 081 932 7894, 061 647 0184-6 လျ: 02 451 0780-1 သည်ဖက်စ်: 02 451 0786 E-mail ကို၎င်း: Mkt@chancon.co.th
အဆိုပါလိုင်း @: @iCHANCON ပုလိုင်း (ID ဖြစ်ပါတယ်): ICHANCON
အမေရိကန်ဝက်ဘ်ဆိုက်: Www.chancon ။ .co.th , Http://GratingThai.com,Http://GratingThai.co.th သည်ကို http: // ဖန်မျှင်ထည်ခြစ် – pitting ဦးထုပ်သံမဏိပိုက်ထုပ်ကတော့ .com ။
FaceBook အပေါ်: Www.facebook.com/GratingThai, Www.facebook.com/FrpFiberGrating.chancon, Www.facebook ။ အဆိုပါ .com / FrpGrating.ManholeCover
ဟာ Youtube ကို: Http://www.youtube.com/mktchancon, Http://www.youtube.com/FRPGratingFiberglass
TwitterShare: Https://twitter.com/GratingThai Https://plus.google.com ။ / + ChanconTh
Manhole အထူးကုရဲ့ပရီမီယံဆန်ခါ | ဖိုင်ဘာဖန်, အဆင်သင့်ရေကန်ပတ်လည်မှာပလပ်စတစ်လျတ်ယိုစီးဆန်ခါသံမဏိဆန်ခါ။ FRP-ဖန်မျှင်ထည်သံမဏိပလတ်စတစ်ဆန်ခါ | အဖုံး manholes သံရဆေိုးအဖုံးကိုသွန်းလေ၏။ ကြမ်းပြင် Mat နေသောလူသွားလမ်း။ ကျဇယား-သို့ကာစ်-သံ MANHOLE မျက်နှာဖုံး | ရေကူးလျှံ သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်း Gully မြောင်းခြစ် | optional ကိုသော့ခတ်ကလစ် Clip Clamp Lock ကိုစွဲစေ Fastener ဘားသံမဏိခြစ်ပီပြင်ကုန်းနှီးပူးတွဲဖုန်းများအတွက် Anchoring အဆိုပါဆန်ခါပန်းကန်လုံလုံခြုံခြုံ | ဆန်ခါထောင်ချောက်စွန့်ပစ် သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းခြစ် Curbed အဆိုပါလမ်းဘေးတစ်လျှောက်ထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းခြမ်းထွက်ခွာမည်။ Scupper | အစွန်းတိဖုံး panel ကိုလှေကားကျော်ကသင်၏နှာခေါင်းကိုဖုံးလွှမ်း | ဥသေတ္တာ panel ကိုလိုက်ကာကင်အလင်းကိုအရိပ်အလင်းအိမ်အတွက်ငါးမွေးကန်ကိုအလှဆင်မျက်နှာဖုံးလုပ်ကွက်ခွဲခြား slat ။ စာရွက်အခင်းမျက်နှာပြင်စလစ်ဖိုင်ဘာဖန် FRP လှေခါးထစ်ကိုနင်းနှာခေါင်းအဆင့်ဖုံးကာကွယ်ပေးသူ: FRP ဆန့်ကျင်စလစ်ဖြတ်ပိုင်းပုံစံ Gritted ပြား sheet | သံမဏိဖောက်ထားသောမြို့ရိုးချိတ်ဝါယာကြိုးချိတ် bracket ကဖောက်ထား Pegboard Hook စင်ပေါ်သိုလှောင် Tools များယူပြီး၏ Winnipeg ဘုတ်အဖွဲ့ပျဉ်ပြား။ DIY Kit | Www.chancon.co.th | Http://GratingThai.com | Http://GratingThai.co.th | အတွက် http: ။ // ဖန်မျှင်ထည်ခြစ် – pitting ဦးထုပ်သံမဏိပိုက်ထုပ် com | လိုင်း @: @iCHANCON / လိုင်း။ (ID): iCHANCON | မိုဘိုင်း ( အရောင်း): 081 932 7894, 061 647 0184-6 လျ: 02 451 0780-1 ။